ကျိုက်မှော်ဝန်း ရေလယ်ဘုရားသို့ တစ်ခေါက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ကျိုက်မှော်ဝန်း ရေလယ်ဘုရားသို့ တစ်ခေါက်
ကျိုက်မှော်ဝန်း ရေလယ်ဘုရားသို့ တစ်ခေါက်
Posted by mgwalone on May 26, 2012 in Local Guides | 11 comments
ဘုရားဖူးများက ငါးစာကြွေးသည်။ ငါးစာထုတ်သော ပလတ်စတစ်များကိုလည်း ရေထဲကို ပစ်ကြသည်။
သန်လျင်လို့ ခေါ်တဲ့ တညင်ကို ရောက်ပေမဲ့ ရေလည်ကျောက်တန်းကို မရောက်တာတော့ ကြာပါပြီ။ ဒီတစ်ခေါက် ခရီးကြုံ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀) ကျော်လောက်က ရောက်ခဲ့တာဆိုတော့ ၀ါးတားတား ပဲ မှတ်မိတော့တာ။ ကျန်တာတွေ ပြောင်းမပြောင်းမသိပေမဲ့ သေချာပေါက် ပြောင်းတာတစ်ခုတော့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အမှိုက်တွေ ပိုပေါလာတာပါပဲ။ ပလတ်စတစ်အသုံးချမှု ပိုများလာတာနဲ့အတူ အမှိုက်တွေလဲ ပိုများလာတာပါပဲ။
ရေလည်က ဘုရားကို သွားဖို့ စက်လှေနဲ့ ကူးရပါတယ်။ တစ်ဦးကို (၂၀၀) ကျပ်ပါ။ စင်းလုံးငှားရင်တော့ ၃၀၀၀၊ စက်လှေအကြီးဆိုရင် ၅၀၀၀ ပါ။
ဘုရားဖူးလာသူများက ငါးစာကြွေးကြတယ်။ ဘုရားပေါ်မှာ ရောင်းပေမဲ့ ကမ်းပေါ်က ငါးစားရောင်းသူတွေက ဟိုမှာမရှိဘူးဆိုပြီး ပြောရောင်းကြတယ်။ ငါးစာတွေကို ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ ထုတ်ပြီး ရောင်းကြတယ်။ ငါးစာကြွေးသူများထဲက အချို့ က အမှိုက်ပုံးထားပေးတာကို မပစ်ပဲ ရေထဲကို အလွယ်တကူး ပစ်ကြတယ်။ ငါးတွေက အစာမှတ်လို့ စားမိရင် သေနိုင်တယ်ဆိုတာ သူတို့ သတိမပြုကြဘူးခင်ဗျ။
ဘုရားဖူးပြီး အပြန် ကမ်းဘေးက ဆိုင်မှာ အုန်းရေသောက်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အသားကို စားခြင်လို့ ခွဲခိုင်းပြီး စားတယ်။ ပိုက်ဆံရှင်းပြီး ပြန်မယ်အလုပ် စားပွဲကို လာရှင်းတဲ့ မိန်းကလေးက စားပွဲပေါ်က အုန်းသီးအခွန်ကို အလွယ်တကူ ရေထဲကို ပစ်ချလိုက်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လန့်သွားတယ်။ ပါးစပ်ကလဲ “ဟဲ့ အမှိုက်ပုံးမရှိဘူးလားဆိုတော့ ရှိတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပဲ ပစ်တာပဲတဲ့။ သူ့မျက်နှာမှာ ပြောသူ ကျွန်တော်ကပဲ လူထူးလူဆန်းတစ်ယောက် ဖြစ်နေတဲ့ ပုံပါ။ သူ့အနေနဲ့က လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် လုပ်လိုက်တဲ့ပုံပါပဲ။ ဘာမျှ ခံစားချက် ရှိပုံမပေါ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ သူပစ်လိုက်တဲ့ နေရာကို သွား ကြည့်တော့ ပုံမှာပါတဲ့အတိုင်း ရောင်စုံအမှိုက်များကို တွေု့ရပါတယ်။ ဒီနေရာကို အမီပြုပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြပေမဲ့ ဘယ်လို စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာ သိပုံမရကြဘူး။ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိပါသလဲ။
Size မလျှော့ပဲ တင်လိုက်တာ။ ပုံတွေက သေးပြန်ပြီ။ အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။
မောင်ဝလုံးရေ. နောက်တင်ရင်ပုံကြီးတင်ပါနော့။resolutionလျှော့ပါ။ဘယ်ဖက်မှာ ထားပါ။
ပြီးမှ insert into post နဲ့ သွားပါ။
ခုလို မထီမဲ့မြင် အမှိုက်ပြစ် သူတွေကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကတော့ ဆက်ပျက်အုံးမှာ
ဘုရားလူကြီး အဲဒီက ရပ်ကွက်လူကြီး ဈေးသည်များ ဘုရားဖူးများ အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
ပုံတွေကို မြင်ရတော့ သွားချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်မိပါအိ။
ကျနော်ကတော့ 2011 ဇူလိုင်လမှာရောက်တော့ တစ်ခါတင်လိုက်သေးတယ်။
ပုံလေးတွေ ဆိုက်အကြီးပြင်ပေးလိုက်ရင် အရမ်းလှမှာ။
သူကြီးရေ အားလုံးအတွက် ပြင်ပေးလိုက်ပါဗျာ။
ကျိုက်မှော်ဝန်း ရေလယ်ဘုရားက ဘယ်မြို့မှာလဲဟင်..
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးးးးေ ကျောက်တန်းမြို့နယ် …..
မိုးတွင်း သွားလည်မယ်ဆိုရင်တော့ လှေဆင်း လှေတက်ကို သတိထားကြဖို့ မနော ပြောချင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ပုံတွေ မသေးအောင် ကြိုးစားပါမယ်။ သူကြီးက ပြင်လို့ရရင် ပြင်ပေးဖုိ့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ရေလယ်ဘုရားက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တန်းမြို့ နယ်မှာပါ။ ရန်ကုန်ကနေ ကားနဲ့ သွားရင် သန်လျင်ကို ဖြတ်ပြီးရင် ကျိုက်ခေါက်ဘုရားနားမှာ လမ်းဆုံ ရှိပါတယ်။ တစ်ခုက သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းဖက်ကို သွားတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျောက်တန်းကို သွားပါတယ်။ ကျိက်မှော်ဝန်း ရေလယ် ဘုရား ဆိုတာထက် ရေလယ် ကျောက်တန်း ဆိုတာက ပိုပြီး လူသိများပါတယ်။
သန်လျင်တို့ ကျိုက်မှော်ဝန်း ရေလယ်ဘုရားတို့ကို ရည်းစားနဲ့ မသွားရဘူးတဲ့ ။ ကွဲတတ်တယ်တဲ့။ ဟုတ်ရားဟင်၊ သွားအုံးမှ
ကဲကြားတယ်နော် ဘုရားတကာကြီး ဦးခင်ညွန့် အုန်းခွံတွေ ရေထဲပစ်ချနေတယ်တဲ့ …
၂၀၁၅ မှာ မဲမထည့်ပဲနေလိုက်မှာနော် ကြည့်လုပ်အုံး….:)
အုန်းခွံတွင် မဟုတ်ဘူး တညင်သားခင်ဗျား။ ရှိသမျှ အမှိုက် အကုန်ပစ်နေကြတာ။ ရောင်စုံ ပလတ်စတစ် တွေလဲ ပါသေးတယ်။ စာရေးဆရာတစ်ယောက် ရေးသလို မြစ်တို့ ချောင်းတို့ ဆိုတာက အမှိုက်သိမ်း မြစ်၊ အမှိုက်သိမ်းချောင်းတွေ ဖြစ်နေတာပါ။